मर्मत, घेराबार, खानेपानी, ट्रस, परम्परागत विद्यालय (गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम), कक्षा ११ र १२ को विज्ञान विषय ल्याव व्यवस्थापनको कार्यक्रमका लागि छनौंट भएका विद्यालयका लागि पत्र डाउलोड – शिक्षा विकास निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेश
क्र.सं. जिल्ला पत्र डाउनलोड
१. कास्की डाउनलोड गर्नुहोस्
२. गोरखा डाउनलोड गर्नुहोस्
३. तनहुँ डाउनलोड गर्नुहोस्
४. नवलपुर डाउनलोड गर्नुहोस्
५. पर्वत डाउनलोड गर्नुहोस्
६. मनाङ डाउनलोड गर्नुहोस्
७. मुस्ताङ डाउनलोड गर्नुहोस्
८. म्याग्दी डाउनलोड गर्नुहोस्
९. लम्जुङ डाउनलोड गर्नुहोस्
१०. बाग्लुङ डाउनलोड गर्नुहोस्
११. स्याङ्जा डाउनलोड गर्नुहोस्
June 23, 2020	by EddWebAdmin in Uncategorized
सूचना अधिकारी - उप-सचिव (अधिकृत दशौं)